ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကမ္ဘာလုံးအဆင့် ကပ်ရောဂါအဖြစ် W.H.O တိုးမြှင့်သတ်မှတ်
March 12, 2020 Alinn Pya 0
ဂျီနီဗာ၊ မတ် ၁၂ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး အဆင့်ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(W.H.O)က အဆင့်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်သည်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ၁၃ ဆမြင့်တက်ခဲ့​ကြောင်း W.H.O အကြီးအကဲ ဒေါက်တာတက်ဒရို့စ် အက်ဟာနွန် ဂီဘရီးစီးယက်စ်ကပြောသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အဆင့်ကပ်ရောဂါဆိုသည်မှာ တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်နက်ထဲ ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့်ရောဂါကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။အဆင့်တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်သော်လည်း ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးထားသည်ကို ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ကြောင်း ဒေါက်တာဂီဘရီးစီးယက်စ်ကပြောသည်။ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာတွင် စတင်ပြန့်နှံ့ခဲ့သည့် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ယနေ့အထိဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူ ၁၈၀၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီး […]
အလုပ်အကိုင်တွေ အဆင်မပြေဖြစ်နေရင် ဒီလိုလုပ်ပါ
အလုပ်ယတြာ ဒီလိုလုပ်ပါအလုပ်အကိုင်တွေအဆင်မပြေဖြစ်နေရင်။ ထိခိုက်ကျဆင်းပြီး အလုပ်ပြုတ်တော့မလို၊ထွက်ရတော့မလိုဖြစ်နေရင် တနဂ်နွေ နေ့မနက် ၉:၄၅ အိမ်ဘုရားမှာဒီလိုလေးလှူကြည့်လိုက်ပါ။ဖန်ခွက်အကြည်တစ်ခွက်ရဲ့ဘေးမှာ ထုံးနဲ့တို့ပြီး “နို့”လို့ရေးလိုက်ပါ။နောက်တစ်ဘက်ခြမ်းမှာ “NO” လို့ရေးပြီးထိုဖန်ခွက်ထဲ နွားနို့ပူပူလေးထည့်ပြီးဘုရားလှူကာ“တပည့်တော်၏အလုပ်အကိုင်များထိခိုက်အဆင်မပြေမှုများမှ ကင်းစင်လွတ်မြောက်ကာအလုပ်အကိုင်တွေရရှိအဆင်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ ဘုရား”ဟု၃ကြိမ်လေးလေးနက်နက်ဆုတောင်းလိုက်ပါ။သုံးကြိမ်ခန့်လှူလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေသွားတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။ စေတနာမှန်လျှင်ကံကောင်းမည် ကေဇော်ဟိဏ်း အလုပ္အကိုင္ေတြ အဆင္မေျပျဖစ္ေနရင္ ဒီလိုလုပ္ပါ အလုပ္ယၾတာ ဒီလိုလုပ္ပါအလုပ္အကိုင္ေတြအဆင္မေျပျဖစ္ေနရင္။ ထိခိုက္က်ဆင္းၿပီး အလုပ္ျပဳတ္ေတာ့မလို၊ထြက္ရေတာ့မလိုျဖစ္ေနရင္ တနဂ္ေႏြ ေန႔မနက္ ၉:၄၅ အိမ္ဘုရားမွာဒီလိုေလးလႉၾကည့္လိုက္ပါ။ဖန္ခြက္အၾကည္တစ္ခြက္ရဲ့ေဘးမွာ ထုံးနဲ႔တို႔ၿပီး “နို႔”လို႔ေရးလိုက္ပါ။ေနာက္တစ္ဘက္ျခမ္းမွာ “NO” လို႔ေရးၿပီးထိုဖန္ခြက္ထဲ ႏြားနို႔ပူပူေလးထည့္ၿပီးဘုရားလႉကာ“တပည့္ေတာ္၏အလုပ္အကိုင္မ်ားထိခိုက္အဆင္မေျပမႈမ်ားမွ […]
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ သူစိမ်းဖြစ်သွားဖူးတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မယ့် ခံစားချက်များ
“အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ သူစိမ်းဖြစ်သွားဖူးတဲ့သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မယ့် ခံစားချက်များ…”အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အရေးပါလွန်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါပဲ။ သူ မရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝကြီးမှာ ဘယ်လိုမှ မပြည့်စုံနိုင်သလို၊ အဆင်မပြေနိုင်လောက်တဲ့အထိ ကိုယ့်ကို လွှမး်မိုးထားနိုင်သူပေါ့။ဒါပေမယ့် လောကကြီးရဲ့ ဓမ္မတာအရ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ခဲ့ခင်ခဲ့ပါစေ သူစိမး်ဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေလညး် ရှိပါတယ်။ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ သူစိမး်ဖြစ်သွားဖူးတဲ့ သူတွေပဲ နားလည်နိုင်မယ့် ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သူကြိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေမြင်ရင်၊ သူ့မွေးနေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျရင် သူ့ကို […]
သင့်ကို လူချစ်လူခင်ပေါများစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း ( မေတ္တာပို့နည်း)
သင် နံနက် အိပ်ယာထလို့ မျက်နှာသစ်တော့မယ် ရေကို စကိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ….. အဲ့လိုဘဲ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် မျက်နှာကို ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချ….. သံဃံ သရဏံ ဂစ္စာမိဆိုပြီး တစ်ခါရွတ် ရေနဲ့ တစ်ခါသပ်ချပါ…. (ဆိုလိုတာကတော့ မေတ္တာမပို့မှီ သရဏဂုံ သုံးပါးကို အရင်ရွတ်လိုက်ပါ)…. အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ သွားတိုက်ချင်တိုက်ပါ သွားတိုက်ရင်း စိတ်ထဲကဂုဏ်တော် ကိုးပါးကိုရွက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်…. […]
တစ်ပတ်စာ ရရက်သားသမီးဟောစာတမ်း (12.3.2020 မှ 18.3.2020 အထိ)
တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းကံဇာတာအထူးကောင်းမွန်သောကာလဖြစ်၍ မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့် ဘဝ၏ တိုးတတ် မှုများ ရှာဖွေခွင့်ရရှိလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတွင် ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်တဲ့အခြားသောကိစ္စများ ပူးတွဲလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ခေါင်းစားသောလုပ်ငန်းကိစ္စများ၊ဉာဏအလုပ်များမှ ထူးထူးခြားခြားငွေကြေးအမြတ်အစွန်းများ ရရှိတတ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်များ ကြီးပွားအောင်မြင်မည့် အကြံဉာဏ်ကောင်းများရှိရင်တော့ လက်တွေ့ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် အကျိုးထူးမည်။အမျိုးမျိုးသော အခွင့်အရေးများစွာအနက်မှ မိမိဘဝမြင့်မားတိုးတတ် မည့် အခွင့်အရေး ကောင်းများ ရွေးချယ်နိုင်မည့် အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးကိစ္စများ ထူးခြားစွာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရပြီး ဆေးပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် အကျိုးရှိဖြစ်ထွန်းမည်။ ငွေကြေးကံကောင်းမွန်၍ […]